ISIBATHANDILE BASILAHLEKELA: UPeter Matlare (1960 – 2021) | Scrolla Izindaba
ISIBATHANDILE BASILAHLEKELA: UPeter Matlare (1960 – 2021)
“Umphathi wezinkampani osenesikhathi, ongumholi omuhle, okhuthazayo futhi onentshisekelo ngomsebenzi wakhe, ubehlale etshala imali enkulu empumelelweni yezwekazi lethu.”
Uchazwe kanjalo-ke oyiPhini Lesikhulu Esiphezulu se-ABSA Group Ltd ongasekho uPeter Matlare, oyi-Chief Executive Officer yeqembu uDaniel Mminele esitatimendeni esikhishwe yiQembu – limemezela ukudlula kwakhe emhlabeni ngokudabukisayo.
UPeter Bambatha Matlare wazalwa ngomhla zingama-30 kuLwezi ngowezi-1960 eThekwini eNingizimu Afrika, usomabhizinisi uMatlare wenza iziqu zakhe ze-Bachelor of Science (i-BSc) e-University of York e-Canada.
Ngemuva kokuthola imfundo yakhe phesheya kwezilwandle uMatlare waba nomsebenzi ophumelelayo kwezamabhange ngemuva kokujoyina i-ABSA ngowezi-2011 njengomqondisi.
Eminyakeni emihlanu ngomhla wokuqala kuNcwaba ngowezi-2016 uMatlare waqokwa njengePhini likaSihlalo weQembu eligxile ekwandiseni ukufinyelelisa i-ABSA e-Afrika kwathi ngowezi-2018 waphinde waba nguMphathi wemisebenzi yesifunda ye-ABSA.
“UPeter yisikhulu esiphezulu esilethe ulwazi oluningi lwamakhono nolwazi lobuholi ezimbonini eziningi. Uyazi ukuthi ibhizinisi lethu lisebenze njengomqondisi ozimele ongeyena owengamele kusukela ngowezi-2011,” kusho isikhulu se-BAGL sangaleso sikhathi uMaria Ramos, ngesikhathi eqokwa.
Ngaphambi kwalokho uMatlare wasebenza njengoMphathi we-Tiger Brands Limited, waba nguMphathi we-South African Broadcasting Corp (i-SABC), waba ngu-Executive Director-Commercial kwa-Vodacom SA, waba ngu-Chief Strategy & Business Development Officer kwa-Vodacom Group Ltd futhi waba nguSihlalo weNhlangano Kazwelonke Yabasakazi.
Ngesikhathi esasekwi-Tiger Brands ngowezi-2008, inkampani yayisolwa ngukokukhuphula intengo yesinkwa kusukela eminyakeni eyi-12 ngaphambi kokuqokwa kwakhe, ngesikhathi uNick Dennis enguMphathi wakwa-Tiger Brands.
Ngemuva kokuthi i-Tiger Brands ihlawuliswe imali eyizigidi ezingama-R99 ngeqhaza elibambile ecaleni izinkwa ebelibandakanya nabanye abakhiqizi bokudla, uMatlare “uthole inhlonipho ngokubuyisa isithombe esihle seqembu ” iphephandava i-Mail and Guardian labike eminyakeni emihlanu ngemuva kokuqokwa kwakhe.
Ngemuva kokulwa izimpi zakhe esaphila, uMatlare ushone ngokuzuma ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid-19 ngeSonto, mhla ziyisikhombisa kuNdasa.
“Kuyadabukisa ukuthi i-ABSA Group imemezele ukudlula emhlabeni koMqondisi wethu omkhulu ophinde abeyiPhini le-Chief Executive, uPeter Matlare, mhla ziyisikhombisa kuNdasa ngowezi-2021 ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid-19.”
UMatlare ubeneminyaka engama-61 ubudala.